Siyaabaha aad uga faa'iidaysa ama Weight | Sida loo saar on Weight
Healthy Siyaabaha korodhka miisaanka
Posted on Laga yaabaa 21, 2017
Haddii aad tahay hooseeyo, aad waxaa laga yaabaa in loo sheegay in ay dhakhtarka waa in aad u miisaan. Haddii aad tahay ciyaaryahan ah, laga yaabaa in aad rabto in aad si loo helo miisaan lambarka mid ka mid ah sababaha – sidoo kale, sababtoo ah aad rabto in aad ku biiri fasal miisaan dheeraad ah oo tartan koob, ama sababtoo ah aad rabto in aad si aad u heshid muruqa, iyo Yaqaannaan aad miisaanka sii korodhsan doonaa iyadoo ay sabab u gashanno in mass muruqa dheeraad ah (recomping – iscaateyaan halka helitaanka xoog – waa mid aad u adag tahay in la sameeyo iyo ma u muuqdaan in ay keento guulaha xoog dareemi dadka hore u haboon).
Sidaas, waxa jira siyaabo ammaan ah oo wax ku ool ah in ay helaan miisaanka? Well, dhammaan siyaabaha in ay helaan miisaanka raaco mabda'a isku mid – cunin calories ka badan oo aad u isticmaali maalin si ku salaysan maalin, iyo miisaanka oo aad ka heli doonto iyadoo ay sabab u.
Su'aashu waxay tahay, sida badan oo dheeraad ah calories waa inaad cuntaan maalin kasta, iyo waxa calories kuwa waa in foomka of?
Haddii aad cunto cuntooyinka qashinka ah, oo aad ka heli doonaa miisaanka, laakiin wax badan oo ka mid ah noqon doona baruurta. Haddii aad cunto cunto waa hodan ku protein iyo dufanka caafimaad, oo waxay leeyihiin siyaado ah calorie waaweyn, markaas weli waad heli doontaa wax badan oo baruurta, laakiin qaar ka mid ah murqaha oo ay la socdaan waxa la. Haddii aad raacdo cunto isla halka kor u miisaanka culus, ka dibna waxaad ka heli doontaa xoog iyo helaan muruqa – iyo sidoo kale baruurta.
Haddii aad cunto dheeri calorie of a 500+ kaloori maalintii marka loo eego tirada guud ee aad kharashka tamarta maalin kasta, ka dibna aad ka heli doonaa baruurta, xataa haddii aad u qaadaya miisaanka culus waqti isku mid ah. faa'iido baruurta waa, nasiib daro, fursan. Cunidda ugu Cunista dheeri ah calorie yar laga yaabaa in lagaaga caawiyo in aad si aad u heshid muruqa dheeraad ah oo dufanku ku yar yahay, laakiin waxaa mar walba noqon doonaa qaar ka mid ah faa'iidada baruurta.
Dadka qaar si fudud aadan haysan calooshooda waaweyn, oo ay ka heli in ay halgan ugu jiraan inay cunaan calories ku filan oo ay si dhab ah u helaan miisaanka – laakiin waxaad ka heli kartaa adigoo isticmaalaya ruxruxaa protein iyo gainers mass, iyo xataa by cabo smoothies si aad u hesho calories dheeraad ah.
Dhab ahaantii, Tababaraha xoog Mark Rippetoe ku talinayaa in dadka kuwaas oo raadinaya in ay helaan wax lagu sakhraamo galaan oo caano ah maalintii si ay u taageeraan qaadashada calorie in uu aaminsan yahay laylis ah waa in ay leeyihiin, halka ay ka qayb galeen barnaamij tababar xoog ah. Tani ma aha wax aad xajin kari lahaa muddo aad u dheer, laakiin nin dhallinyaro ah oo raadinaya in ay helaan mass muruqa halis ah, waxay noqon kartaa doorasho.
Waxaa run ahaantii waxay ku xiran tahay ina sababta aad ay isku dayayaan in ay helaan miisaanka, aad Halabuurka jirka hadda iyo miisaanka, Dadaada, jinsigaaga, iyo heerka aad hadda ah taam.
Haddii aad ka soo kabsaday xanuun cunidda ah, tusaale ahaan, ka dibna aad jidka waxa uu noqon doonaa kala duwan si ay qof kaliya raadinaya in ay helaan wax yar oo miisaan inta aad uurka leedahay. Haddii aad qabto wax dareen ah ama aadan hubin waxa la sameeyo, ka dibna la hadal dhakhtarkaaga marka hore ka hor inta ay beddelaan hab nololeed.